Madaxweynaha Puntland oo ku eedeeyay Somaliland in ay daandaansi milatari ka wado gobolka Sanaag - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo ku eedeeyay Somaliland in ay daandaansi milatari ka wado gobolka Sanaag
March 12, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland ayaa ku eedeeyay Somaliland in ay daandaansi milatari ka wado gobolka Sanaag.
Siciid Cabdullaahi Deni oo ka hadlayay Garoowe maanta oo Talaado ah ayaa sheegay in maamulka Somaliland ay maalmihii u dambeeyay ay dhaqdhaqaaq iyo duulaan ay ka waday gobolka Sanaag.
Madaxweynaha Puntland ayaa intaas ku daray in Puntland ay marwalba tixgelinaysay nabadgelyada gobolka balse haddii Somaliland ay joojin weydo gardarada ay la kulmi doonto cawaaqib xumo.
Hadalka madaxweynaha Puntland ayaa yimid kadib dhowr maalin markii Somaliland ay ciidamo keentay deegaano kuyaala gobolka Sanaag.
March 31, 2019 Safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya oo kulan kula yeeshay madaxweynaha dowladda Puntland magaalada Boosaaso
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha cusub ee Puntland Siciid Cabdullahi Deni ayaa maanta oo Isniin ah si rasmi ah xafiiska u la wareegay, asbuuc kadib markii uu ku guuleystay doorashada madaxweynaha. Munaasabada xil-wareejinta madaxweynaha oo ka dhacday [...]
Ciidamada dowladda Soomaaliya oo Muqdisho ku xiray Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa xalay oo Isniin ahayd Muqdisho ku xiray Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo ahaa musharax madaxweyne, sida ay sheegeen masuuliyiintu. Qoraal uu boggiisa Facebook soo dhigay, Xildhibaan Axmed Fiqi ayuu ku [...]